गाडी कुहिए, मजदुर भोकै छन्, हामी ब’र्बाद भयौं यातायात व्यवसायीको प्रश्न– बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ? - Mitho Khabar
June 22, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on गाडी कुहिए, मजदुर भोकै छन्, हामी ब’र्बाद भयौं यातायात व्यवसायीको प्रश्न– बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ?
स्थानीय प्रशासनले जोर–बिजोर प्रणाली र निषेधाज्ञा जारी गरेपछि गत वर्ष ६ महिना पनि सार्वजनिक यातायात चल्न पाएनन्। जब, यातायात सुचारु हुन थाल्यो, फेरि कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो चरण शुरु भयो । ०७८ वैशाख १६ पछि देशभर निषेधाज्ञा लागु हुँदा लामो र छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ ।
गत वर्षको लकडाउन र निषेधाज्ञाको बीचमा सार्वजनिक सवारी साधनको कागजपत्र फेल भएको जरिवानासमेत तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै छैन’ सिटौला भन्छन्, ‘बैंकले हामीलाई सहुलियत गरेको छैन, यसमा राज्यको तर्फबाट कुनै पहलकदमी भएको छैन।’
०६९ सालदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको यातायात क्षेत्र थप संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सिटौलाले भने, ‘हामीले गाडी कुहाउन राखेका होइनौं, तर यसमा कसैको होमवर्क देखिएन । दोस्रो चरणको महामारीसँगै झण्डै दुई महिनादेखि बन्द भएको यातायात सुचारु गर्नुअघि यातायातका कर्मचारी र मजदुरलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग यातायात व्यवसायीले उठाएका छन् । ‘गाडी कुहिए, मजदुर भोकै छन्’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘यातायात ब्यवसायी रोग, भोक र बैंकको किस्ताको त’नावमा छन् ।’
कक्षा १२ को परिक्षा भाद्रमा; हेर्नुहोस् नया परीक्षा तालिका
सवारी दुर्घटनाका कारण एक वर्षमा उपत्यकामा यति जनाले ज्यान गुमाए (हेर्नुहोस्)
July 4, 2020 mithokhabar